၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၂ ရက် ကြာသပတေးနေ့ ရွှေဈေးငွေဈေး | The Myanmar Industry Guide
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၂ ရက်
အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် - - -
အရွက်ဈေး ကျပ် 2015~2035 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။
ဗဟိုဘဏ် ရည်ညွှန်းဈေး ကျပ် 1850 (± 3)ဖြစ်ပါသည်။
ယူရို ဒေါ်လာ 2140 ကျပ်
စင်ကာပူ ဒေါ်လာ 1480 ကျပ်
မလေးရှား ရင်းဂစ် 460 ကျပ်
ထိုင်း ဘတ် 60.5 ကျပ်
ဂျပန် ယန်း 18 ကျပ်
တရုတ် ယွမ် 320 ကျပ်
အကယ်ဒမီ မီးလင်းအခေါက်ရွှေစျေး 1,982,000 ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေစျေး တစ်အောင်စ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1848 ဝန်းကျင်ရှိပါသည်။
. WORLD GOLD PRICE .
Banking & Loan Read 12941 times